Etu Ndi Ochichi Ndi Ochichi Ji Eji Ahịa Email | Martech Zone
N’ime ntuli aka ole na ole gara aga, emehiere m idehi ụfọdụ isiokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na blọọgụ a. M jabbed a hornet na akwụ ya nụ banyere ya ọtụtụ ọnwa mgbe. Nke a abụghị blog ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụ blog ahịa, yabụ m ga-edebe ihe m kwuru. Nwere ike ịgbaso m na Facebook iji hụ ihe ọkụ ọkụ. Nke ahụ kwuru, ịzụ ahịa bụ ntọala maka mkpọsa ọ bụla.
Na mkpọsa a, anyị na-ahụ Donald Trump na-egwu egwu nkịta mgbasa ozi ọdịnala dịka ezigbo ọkachamara. Ọ nọ na-elekwasị anya ruo ọtụtụ afọ ma ghọta otú e si eme ka ndị mmadụ na-ekwu banyere ya. Obi abụọ adịghị ya na nke a rụrụ ọrụ dịka ndị ọzọ na-azọ ọchịchị ndị Republican niile adaala n'okporo ụzọ. Ọ bụ ezie na nke ahụ na-ewuli aha, ọ nwere ike ọ gaghị emeri ya na mkpọsa ahụ.
Email abụrụla onye nche ọnụ ụzọ njiri mara anyị n'ịntanetị. Chee echiche otu a, ụdị na ọrụ ole ka anyị na-edebanye aha site na itinye email anyị? Nke a emeela email, ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi, otu n'ime ngwa ahịa ahịa kachasị mma nke ụlọ ọrụ ọ bụla, dị ka egosipụtara n'ụzọ doro anya na data nyocha anyị. Maka ọtụtụ mmadụ, ihe ndị a emeela email oge na-ewe ma na-ahazi nhazi. Nke a bụ ihe mere anyị ji kee ihe Ozi Alto, iji nyere ndị ọrụ email aka ịchịkwa ma lelee igbe ozi ha niile. Marcel Becker, Onye isi nchịkwa Ngwaahịa na AOL
Anyị ahụlarị ọtụtụ ntuli aka ole na ole na-aga ebe ahịa ahịa dijitalụ bụ ihe dị mkpa. N’okwu nke mbụ ya, ndị otu onye isi ala Obama gbara ọsọ egwuregwu egwuregwu nke wuru nnukwu onyinye na ọdụ data ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụkọ ntolite. O doro anya na ndị ọrụ mgbasa ozi Bernie Sanders gbasoro ihe nlereanya ya. Ọ bụ ezie na Sanders agaghị emeri isi, nchekwa data ya nyere nnukwu ego, niile na obere ntinye. O mekwara nke a mgbe Hillary Clinton nwere ohere ịbanye na nchekwa data nke Democratic ruo nwa oge tupu otu ahụ enyefee ndị ndọrọndọrọ abụọ ahụ ikike.
Onye isi ochichi onye isi ochichi nke isi ihe eji eme ihe
Hillary Clinton na-eduga ngwugwu ahụ ndenye aha email. 46% nke ndị zaghachiri na ntinye aha email nke Hillary Clinton na 39% maka Bernie Sanders na 22% maka Donald Trump.
Email bu ihe mbu eji eme ihe bulie ego. Ihe karịrị ọkara nke ozi ịntanetị mgbasa ozi (57%) lekwasịrị anya na onyinye. 59% nke ndị zaghachiri kwuru na ha nyere onyinye maka mkpọsa Hillary Clinton mere ka ha mee nke a site na email, ma e jiri ya tụnyere naanị 19% nke ndị na-akwado Donald Trump.
Email na Social Media kachasị anabata ahia ọwa, Ndị zaghachiri na-akọ email (18%) na mgbasa ozi mmekọrịta (19%) dịka usoro kachasị amasị ha iji nweta ozi mkpọsa.
Ọ bụ a na-adọrọ mmasị ntuli aka si ahịa si ele ihe anya. Ọ bụ ezie na ọnụego nnabata adịghị mma ma ndị okike yiri ka ha na-agba ọsọ site na ọnọdụ centrist, nzaghachi ọnụego site na ọdịnala na ndị dijitalụ na-adịghị na chaatị ahụ. Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ mmetụta nke egwuregwu ọ bụla n'ahịa a na-abịa na Nọvemba. Tinye Alto Mail ọnụ ihe omuma a na data.
Tags: bernie sandersDonald opionyinyentuli akahillary clintonegoomume ndọrọ ndọrọ ọchịchịonyinye ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchịpresidentntuli aka ndi ochichi